Fiber Laser Goynta Machine, Laser xardho Machine - Gold Mark
Waxa Aan Bixino
Mashiinnada Nadiifinta Laser
Mashiinka xardha laser-ka
Tan iyo 2006, waxaan lagu qeybinayay dunida oo tayo sare leh wax soo saarka wax xardha laser. Maanta, waxaan sidoo kale ku siin mashiinada iyo adeegyada la kulmi macaamiisheena 'laga filayo kala duwan xardho laser iyo laser sixitaanka.
Tayada ka bilow ilaa iyo dhamaad
Waxaan heegan u bixinta oo tayo leh si ay macaamiisha buuxda oo dhammuba aannu marno, ka shaqsi kuwa shirkadaha. Waxba ma ahan wixii aad isticmaasho our xardha laser oo xal laser sixitaanka ee, aadan ka xumaan doonaan.
Shaqaaluhu waxa ay had iyo goorba u tababaran oo ku saabsan ammaanka
Our koox weyn, khibrad, iyo saaxiibtinimo waxaa si joogto ah loogu tababaray inay u dhigma heerka ammaanka warshadaha. Mid kasta oo naga mid ah waa inuu xaqiijiyo in ay si adag u raacaan waxyaabaha measures.All ammaanka ayaa sidoo kale la baari doonaa si adag ka hor tago our warshad.
Waxaan u isticmaali technology shaqada ka badan sameeyo si hufan
Sayniska iyo technology yihiin ciidamada soo saar hoose. Our shaqo ku xiran tahay technology cusub oo aan u isticmaalno inta lagu jiro wareegga wax soo saarka. Waxaa fure u ah qancinta macaamiisha tayada sare ee alaabta our.
WAXYAABAHA LAGU IIBIYO KULUL
3000w Mashiinka goynta leysarka fiber-ka TS-3015 ee xaashida birta ah
2000w Mashiinka goynta leysarka fiber-ka TS-3015 ee birta xaashida ah
Taarikada birta ah ee 1500w mashiinka goynta leyska
1000w mashiinka goynta leysarka fiber-ka TS-3015 ee xaashida birta ah
Mashiinka calaamadeynta laser-ga ee muraayadda ah
Laser xardha TS6090L Gray nooca cad
Laser xardha TS6090H
Laser xardha TS4060L
MachineTS1080 Jarida Laser
Laser magaabay wiil TS1390
Laser magaabay wiil TS1810
Laser TS1325 Machine Jarida
Cusbooneysii mashiinka goynta fiber-ka isha lasercus laser 1000w 600 * 600mm Japan Yaskawa motor Taiwan Hiwin Guide
codsiga iyo fiidiyaha
Mashiinka goynta laser Fiber goynta 6mm bir kaarboon
Mashiinka goynta laser fiber -ka 3mm video goynta birta kaarboon
1000W Mashiinka goynta laser -ka Fiber -ka fiidiyaha aluminium
Xidhmay Laser Calaamadaynta Calaamadaynta Video
Video mashiinka xardho Laser
CO2 mashiinka xardha laser
Mashiinka goynta laser TS1325 fiidiyaha goynta
Fiidiyowga ka saarida dusha sare ee mashiinka nadiifinta birta
TS1545 Mashiinka Goynta Fiber Laser
LM1325 mashiinka goynta laser qaab weyn
Qaab-weyne Fiber Laser Machine Calaamadaynta
Mashiinka iibinta dahabka ee miiska
1390 mashiinka xardho iyo goynta laser
1000w Mashiinka alxanka Laser Habka gacanta
Mashiinka Goynta Laser 1530-1000W
Warshadda ugu jaban Shiinaha Ce oo la ansixiyay 30W Fiber Laser Machine Calaamadaynta oo leh Filter Hawada
Our Newsletter Weekly
Diyaar u ah inay wax badan ka bartaan?
Ma jiraan wax garaacaya natiijada ugu dambaysa ee qof ahaan. Eeg haddii mashiinka leysarka Gold Mark uu kugu habboon yahay adiga oo helaya buug -yare ay la socdaan shaybaarka xardhan laser.